နောက်နေတာလားလို့ မထင်နဲ့နော် ! တကယ်ကြီးပြောနေတာပါ ။
အွန်လိုင်းသုံးရင်း ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်လေးတွေ ဆုလက်ဆောင်အဖြစ်ပြန်ရနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းကောင်းလေးတစ်ခုကို aavashare.com က
ဘယ်လိုလုပ်ရင် ဆုလက်ဆောင်တွေရနိုင်မလဲ ?
အရမ်းလွယ်ပါတယ် ။ Share ခလုပ်လေးကို နှိပ်တတ်ရုံနဲ့ ဆုလက်ဆောင်တွေ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် ။
စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင်တော့ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဆက်ကြည့်ကြရအောင်နော် ...
Aavashare.com ဆိုတာကတော့ ကိုယ်သဘောကျရာ နိုင်ငံတကာအနုပညာဖျော်ဖြေရေးသတင်းတွေ ၊ ဗဟုသုတတွေ ၊ ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေ ၊ အိမ်တွင်းအလှဆင်မှု ၊ lifestyle ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတွေ စသဖြင့်
ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာသတင်းတွေကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ သတင်း Website ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်နည်းအားဖြင့် စာရေးသူတွေနဲ့ စာဖတ်သူတွေ ချိတ်ဆက်တဲ့ အသိုက်အ၀န်းလေးတစ်ခုပေါ့ ။
ဘာကြောင့် ဒီလို ဆိုရသလဲဆိုတော့ Aavashare ရဲ့ ထူးခြားချက်က စာဝင်ဖတ်ရုံတင်ဖတ်လို့ ရတာမဟုတ်ဘဲ စာရေးရတာ ၀ါသနာပါတဲ့ သူတွေဆို website မှာ မည်သည့်အခကြေးငွေမှ ပေးစရာမလိုဘဲ အကောင့်ဖွင့်ပြီး ကိုယ်တိုင်
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ၀င်ရောက်ရေးသားနိုင်တာပါ ။ ကိုယ်ရေးတဲ့စာလေးတွေကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်ဆီမျှဝေပေးနိုင်မယ့် ပြည်သူတွေလက်ထဲက ကွန်ယက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
Aavashare.com မှာ စာဖတ်သူတွေအတွက်ရော စာရေးသူတွေအတွက်ပါ အကျိုးရှိစေမယ့် အစီအစဉ်လေးတစ်ခုလဲ ရှိနေပါတယ် ။ အဲဒါကတော့ Aavapoint လို့ခေါ်တဲ့ အမှတ်စုဆောင်းပြီး ဆုလက်ဆောင်ပြန်ထုတ်ယူနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်လေးပါ ။
အမှတ်စုဆောင်းနည်းက နှစ်မျိုးရှိပါတယ် ။
၁ ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သတင်းကို Share ပြီး အမှတ်စုဆောင်းခြင်း
၂ ။ Blog ရေးပြီး အမှတ်စုဆောင်းခြင်း တို့ပါ ။
ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Aavashare.com က သတင်းတိုင်းရဲ့ အောက်ခြေမှာ facebook (or) inkedin.com ရဲ့ ပုံလေးတွေရှိပါတယ် ။ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ သတင်းကို အခြားသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပါ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့
Facebook ကို Share ပေးချင်တယ်ဆို facebook ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါ ။
တစ်ဖက်မှာလည်း ဒီသတင်းကို Share ရင်ရနိုင်မယ့် အမှတ်ကို ဖော်ပြထားပေးပါတယ် ။ တစ်ခု Share ပြီးတာနဲ့ တစ်ခါ အမှတ်ရပါတယ် ။ စာဖတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုနည်းနဲ့ အမှတ်တွေကို စုဆောင်းနိုင်ပြီး
စာရေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်သူများလေလေ ၊ Share တဲ့သူများလေလေ အမှတ်တွေတက်လာလေလေ ဖြစ်မှာပါ ။
ကိုယ်ရေးတဲ့ စာကို လူတစ်ယောက် Share ရင် ၅ မှတ်ရတယ်ဆို ။ လူ ဆယ်ယောက်က သဘောကျနှစ်သက်လို့ Share ယူသွားမယ်ဆို စာရေးသူမှာ အမှတ် ၅၀ ရသွားပါပြီ ။
စာရေးတဲ့သူရော စာဖတ်ပြီး သဘောကျလို့ Share တဲ့သူအတွက်ပါ အမှတ်တွေရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် ။
Aavapoint အမှတ်တွေ စုဆောင်းပြီးတဲ့အခါ အမှတ်အလိုက် တန်ဖိုးသက်မှတ်ထားတဲ့ ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်လက်ဆောင်တွေကို Exchange လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
ရေးချင်တဲ့စာတွေလဲ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ဆီချပြခွင့်ရ ၊ သတင်းတွေလဲဖတ်ရ ၊ ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်တွေလဲ လက်ဆောင်ပြန်ရဦးမှာ ဆိုတော့ ဘာလိုသေးလဲ ဦးကြီးရယ် ပေါ့ ...
ကဲ ... ခုပဲ အမှတ်တွေကို စယူပြီး ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်တွေနဲ့ လဲချင်ပြီဆိုရင်တော့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းအနေနဲ့ http://www.aavashare.com မှာ အကောင့်အမြန်စဖွင်ပြီး လှုပ်ရှားလိုက်ပါတော့နော် ...
So Thet 12/10/2017 at 07:14 PM
စိတ်ဝင်စားလို့ရှင့် ဘယ်လိုaccount ဖွင့်ရမလဲ
Zon Phyu 12/10/2017 at 08:06 PM
Account ဘယ်လို့ဖွင့်ရမလဲရှင့် စိတ်ဝင်စားလို့ပါ
Esther April 13/10/2017 at 10:26 PM
စာရေးရတာကြိုက်လို့ ကိုယ်ရေးချင်တာတွေ ရေးလို့ရလို့ good
Snow Pinky 15/10/2017 at 10:45 AM